Shirweynaha Xeer-ilaalinta Qaranka oo ma furmay magaalada Baydhabo – Somali Top News
September 21, 2019 Somali Top News	0 Comments Shirweynaha Xeer-ilaalinta Qaranka oo ma furmay magaalada Baydhabo
Shirkaan Xeer ilaaliyeyaasha Qaranka oo ah kii labaad oo ka dhacay magaalada Baydhabo, ayaa ujeedada ugu weyn tahay sidii loo adkeyn lahaa madax bannaanida Garsoorka dalka labadiisa heer Federaal iyo heer dowlad gobolleed.
Guddoomiyaha maxkamadda sare, Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka xeer ilaaliyeyaasha dowlad gobolleedyada iyo xubno ka tirsan bahda Garsoorka ayaa madasha magaalada Baydhabo isugu yimid, waxa uu shirka socon doonnaa seddex maalin oo xiriir ah.
Xeer ilaaliyeyaasha dowlad gobolleedyada ayaa soo dhoweeyey adkeynta madax banaanida Garsoorka, ballanna qaaday in ay si hufan ugu shaqeyn doonaan.
Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad gobolleedka Koofur Galbeed Axmed Cali Muuse ayaa hoosta ka xariiqay in isku xirnaanta Garsoorka Federaalka iyo midka dowlad gobolleedyada, lana dhowro madax bannaanidiisa.
“Garsoorka oo ka mid ah hey’adaha ugu sarreysa dalka, kana madax bannaan hey’adda fulinta ayaa mudnaan weyn u leh shacabka Soomaaliyeed marka loo fiiriyo xaaladda uu dalka marayo” ayuu yiri Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Dr Axmed Cali Daahir.
Baashe Yuusuf Axmed guddoomiyaha Maxkamadda sare ee Dalka oo si ramsi ah u furay shirka ayaa carrabka ku adkeeyey in isbaddel weyn uu ka jiro Garsoorka dalka, hey’adhaa ku shaqada lehna ay waajib ku tahay in ay dhaqangelinayaan madax baanaaniddiisa, waxa uu tilmaamay in shacabka oo baahi weyn u qabo Garsoorka lagu kalsoonaan karo, shirkaan uu geeddi-socodkaas qeyb ka tahay.
Shirka Qaran ee Xeer ilaaliyeyaasha Dalka ayaa ku soo beegmaya iyada oo uu maanta madaxweynaha Dalka saxiixay Sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaallanka Musuq-maasuqa labada heer, sidoo kale golaha wasiirrada Soomaaliya ay khamiistii ansixiyeen dib ugu noqoshada miisaaniyadda dowladda ee 2019-ka, waxaa muuqda tallaabooyin is qaadanaya oo musuqa lagula dagaalamayo laguna dhaqangelinayo sarreynta sharciga.
← Al-Shabaab leader lashes out at Kenya over maritime dispute
Ku dhawaad sanad kadib madaxweyne Farmaajo oo saxiixay sharciga la dagaalanka Musuqa →
Puntland oo joojisay shir xukuumadda Soomaaliya ku qaban laheyd Garoowe
Al shabaab iyo ciidanka dowladda oo ku dagaalamay Baar Sanguuni
Al shabaab oo markale soo bandhigay askar ka soo goosatay Dowladda